HomePod Firmware Cusub Oo Soo Baxay Inta Aan Sugeyno Imaatinkiisa | Waxaan ka socdaa mac
Afayeenka caqliga badan ee Apple ayaa la filayay Kirismaska ​​soo socda cusub iMac Pro. Si kastaba ha noqotee, dhowr toddobaad ka hor Apple ayaa faallo ka bixisay arrintaas waxay daahisay daah-furkeeda bilowga sanadka soo socda ee 2018. Waana sugitaanka kooxdan cusub - iyo waaxda Apple - ayaa la weydiinayaa.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Cupertino ayaa la ogyahay inay guriga ku tijaabinayaan codbaahiyaha. Iyo kuwan waxay heleen qalab cusub oo lagu cusbooneysiinayo cutubyadooda. Cusboonaysiinta lama heli karo iyada oo loo marayo marinka beta ee soo-saareyaasha, markaa kaliya tijaabiyeyaashaada ayaa awood u yeelan kara soo dejinta.
Xusuusnow in markii la bilaabay shirkadan HomePod ay horaantii sanadkan Waxay ka bixiyeen tilmaamo badan oo ku saabsan naqshadeynta iPhone X ee hadda jira iyo sidoo kale muuqaalka cusub ee xiddigga ee lugta madow ee Apple: Face ID; Xanta qaar ayaa sharad ku bixinaya ka dib markii la soo saaray nooca koowaad ee af-hayeenka caqliga badan, nooc labaad oo leh nidaamkan aqoonsiga wajiga ayaa sharad lagu geli doonaa.
Si kastaba ha noqotee, bilo ka dib Apple ayaa bilawday-bishii Oktoobar- qalab cusub oo loo yaqaan 'HomePod' ilaa maanta, kaas oo uu ku biirayo qalabka cusub. Apple Watch iyo Apple TV betas dadweyne. Ma jiro qalab cusub oo la filayo in la soo saaro - sanadka waxaa horey loogu sii dejiyey Cupertino iyadoo la filaayo 2018. Hadda haa waxay noqon kartaa mid xiiso leh in la ogaado shaqooyinka cusub ee afhayeenka caqliga ku saleysan kaaliyaha dalwaddii Siri.
Waa run in dib u dhaca ku dhacay adeegsadeyaal badan oo iska ilaaliya. Hadda, wax badan kuma heshiin karnay Phil Schiller taas waxaa fiican inaad dib u dhigto daahfurka HomePod marka loo eego inaad soo saartid badeecad cilladaysan oo ay bilaabaan helitaanka dhaleeceyn cusub. Tusaalaha ugu caansan ee hadda jira ayaa ah kan iOS 11 oo wata qalab duug ah iyo hoos u dhac bahalnimo oo ku yimid waxqabadka marka la eego ismaamulka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Firmware cusub oo HomePod ah ayaa lasoo saaray inta aan sugeyno imaatinkiisa